Home » Toerana fitsangatsanganana » Niditra tao Malezia i Sanya mba hampiroborobo ny hatsaran-tarehiny voajanahary sy ny voromahery tokana ao aminy
Tanàna fizahan-tany malaza any Sanya, Sanya, dia mandefa ny fankalazana an'i Sanya 2017 ao an-drenivohitra Malaysia Kuala Lumpur ho ampahany amin'ny ezak'izy ireo hampahafantatra an'i Sanya amin'ireo mpizahatany iraisam-pirenena.
Sanya, miorina ao amin'ny Nosy Hainan any Shina ary malaza amin'ny morontsiraka mahafinaritra, dia nahita fitomboan'ny mpizahatany niditra tato ho ato. Tamin'ny taona 2016 dia nanintona mpizahatany 448,900 25.31 niditra i Sanya, nitombo mihoatra ny XNUMX% isan-taona.
“Sanya dia toeram-pizahan-tany marobe manana hatsarana voajanahary ary toetrandro mahafinaritra. Ny mari-pana eo anelanelan'ny 22 degre hatramin'ny 26 degrees Celsius (71F ka hatramin'ny 78F), izay mahasarika mpitsidika marobe avy an-trano sy any ivelany isan-taona, "hoy i Deng Zhong, filoham-boninahitry ny Fikambanan'ny Vondron'olona Sanya ho an'ny firenen-kafa.
Tao amin'ny ivontoerana fiantsenana malaza UTAMA no nankalazana izany fankalazana izany. Nahitana fampirantiana sary tao an-tanànan'i Sanya, fampisehoana sakafo, traikefa an-tsary mifototra amin'ny zava-boahary (VR) momba ny zava-boahary voajanahary ao an-toerana ary fampirantiana kolontsaina ny zom-pirenenan'i Li eo anelanelan'ny toerana manintona hafa.
Nandritra ny fampiratiana, nisy seho amoron-dranomasina virtoaly misy morontsiraka, elo amoron-dranomasina ary peratra lomano natsangana teo an-toerana, nanolotra mpitsidika traikefa tena izy tamin'ny fandehanana nankany amin'ny tanàna amoron-tsiraka. Ho fanampin'izany, ireo vehivavy ao an-toerana misy ny zom-pirenenan'i Li dia nampiranty ny kanto kanto, ny dihy ary ny talenta fanenomana, nahazoany tehaka fatratra avy amin'ny vahoaka.
“Mahafinaritra ny mijery sy miaina ny kolontsain'ny vahoaka maroloko any Sanya. Tsy andriko izao ny handeha ho any Sanya ary hikaroka irery, ”hoy i Gillian Tee Yin Ming, avy any Malezia.
Raha naneho hevitra momba ny safidin'ny fizahan-tany any Malezia i Deng Zhong dia nanampy fa na dia miorina ara-jeografika eo akaikin'i Malezia aza ny tanànan'i Sanya ary mizara fitoviana ara-kolontsaina ireo faritra roa ireo dia misy ihany koa ny tsy fitovizany.
“Sanya dia manana morontsiraka mahafinaritra sy kolontsaina tokana an'ny Li sy Miao vitsy an'isa. Ary koa, sakafo manokana dia manintona sy manintona. Ireo rehetra ireo dia mety hitondra traikefa mahatalanjona ho an'ireo mpizahatany avy any Malezia. ”
Tamin'ity taona ity, Sanya dia nanao sonia sonia niaraka tamin'ny Maleziana Malezia momba ny fametrahana fifandraisana am-pirahalahiana ary nanokatra làlana iraisam-pirenena 19, toa an'i Sanya-Penang-Kuala Lumpur, izay nametraka fototra mafy orina ho an'ny fifanakalozana eo amin'i Sanya sy Malaysia.
Aorian'ny fisehoana an-dalambe any Malezia amin'ny 25 Jolay, hanohy ny doka ho fampiroboroboana ny "Fankalazana" amin'ny firenena hafa ny governemanta Sanya. Ny fijanonana manaraka dia i Indonezia amin'ny 27 Jolay.